Fomba 9 hijerena miaraka amin'ny sarimihetsika an-tserasera - Fialam-Boly
Levitra Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Fitness Mpahay Nahatratra Fanafody An-Trano Fomba Fanamboarana Fahasalamana Celeb Style Ao Amin'ny The News Haingo
Fomba 9 hiarahana mijery sarimihetsika an-tserasera (mora kokoa noho ny eritreritrao)
Na dia eo aza ny andro sarotra indrindra amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina, dia niaiky izahay fa: hitazona ny fahazaran-dratsy sasany amin'ny fahazaran-dratsy. Raharaha saona? Mijery sarimihetsika sy seho miaraka amin'ireo olona tiantsika nefa tsy miala amin'ny fandriana. Ireto misy fomba tsara indrindra - manomboka amin'ny Zoom ka hatramin'ny Rabbit (hanazava izahay, aza manahy) - hiara-mijery sarimihetsika an-tserasera, na dia lavitra an'arivony kilaometatra aza ianao. Raiso ny popcorn.
Mifandraika: Sarimihetsika mahatsikaiky 20 amin'ny Netflix Azonao atao ny mijery hatrany hatrany
Nahazoana lalana avy amin'ny Zoom
Mitady vahaolana maimaika tsy misy olana? Amporisihinay ny handahatra fety hijerena amin'ny alàlan'ny sehatra fifampiresahana horonantsary toa ny Zoom, Skype na ny Houseparty —amin'izany, ny tsirairay dia afaka manapa-kevitra amin'ny horonantsary iray, milalao gazety amin'ny fotoana iray ary mankafy ny sary misy fepetra takian'ny teknolojia faran'izay kely.
Raha hampiasa Zoom sy Skype dia mamorona kaonty tsotra fotsiny ary manomboka (na fandaharam-potoana) fivoriana. Hiteraka rohy azonao alefa amin'ny namana sy fianakaviana izany. Houseparty, etsy ankilany, mamela ny mpampiasa hanao hetsika hafa — toy ny lalao — mandritra ny resaka an-tsary. Aza adino anefa ny manidy ny vondrona misy anao amin'ny vahoaka raha vantany vao niditra tao amin'ny efitrano ny olon-drehetra, raha tsy izany dia mety hisy olon-tsy fantatra hiditra ao aminao Diary Princess marathon.
Andramo ny Zoom
Andramo ny Houseparty
Ny rindrambaiko dia mamela anao hiresaka horonantsary sy handinika horonantsary miaraka amin'ny hafa lavitra, izany hoe hijerena amin'ny ora mitovy. Tombontsoa: Tena be mpampiasa, izany hoe ny zanakao dia tsy hanana olana amin'ny fikirakirana ny interface. Cons: Serivisy manokana an'ny YouTube izy io, ka somary voafetra ny safidinao mivantana.
Andramo i Gaze
Raha mbola miaina anaty akanjo mandry ianao dia aza matahotra. Miaraka amin'ny MyCircleTV, ny mpampiasa dia afaka mijery sarimihetsika miaraka amin'ny namany amin'ny alàlan'ny fifampiresahana am-peo (tsy ilaina ny horonan-tsary). Oh, ary efa nilaza ve isika fa tsy misy fisoratana anarana manelingelina takiana?
Andramo ny MyCircleTV
4. Antoko Netflix
Misy ny fanitarana Google vaovao ahafahan'ny mpiserasera miresaka SY miaraka mijery ny serivisy mivantana. Nahita ny blouse Jen an'izany ve ianao Maty ho ahy seho? Mila izany aho… izao.
Andramo ny Netflix Party
Mampahafantatra fanitarana iray hafa izay ahafahanao manangona vondrona serivisy isan-karazany, ao anatin'izany ny Netflix, HBO Now, Vimeo, YouTube ary Amazon Prime Video. Raha mahatsapa adventurous fanampiny ianao dia mamela anao hijery ilay Hulu sy Disney + ny takelaka premium (mazava ho azy fa sarany fanampiny).
Andramo ny TwoSeven
Hevero ho toy ny antoko Netflix ity… amin'ny steroid. Ny mpampiasa dia tsy vitan'ny hoe mifampiresaka video fotsiny mandritra ny fandefasana azy fa afaka mifampita hafatra ihany koa ary mandefa antontan-taratasy ara-potoana.
Andramo ny Scener
Mitovy amin'ny Netflix Party, ny Hulu Watch Party dia mamela ny mpamandrika hiara-mijery sarimihetsika, na aiza na aiza toerana misy azy ireo. Raha te hampandeha azy io dia tadiavo fotsiny ilay kisary Watch Party, izay hita eo amin'ny pejy amin'ny antsipiriany eo akaikin'ny Lisitra. Amin'izao fotoana izao dia endri-javatra amin'ny Internet ihany izy io, saingy tsy maintsy ho hita amin'ny fitaovana hafa atsy ho atsy.
Andramo ny Hulu Watch Party
Nahazoana lalana avy amin'i Disney +
Miaraka amin'ny Disney + GroupWatch, ny mpampiasa dia afaka mandrindra fitaovana hatramin'ny fito manerana ny tranonkala, finday ary fahitalavitra hiaraha-mijery sarimihetsika. Zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy endri-chat — fa kosa, ny mpijery dia mifampiresaka amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra emoji.
Raha te hampandeha ny GroupWatch dia safidio fotsiny ilay kisary toa olona telo tafangona, izay hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery. Hiteraka rohy iray azo zaraina amin'ny namana sy fianakaviana izany.
Andramo ny Disney + GroupWatch
Ny bitro dia mamela anao hilalao Netflix, YouTube ary sarimihetsika an-tserasera hafa (na lalao!) Miaraka amin'izay tianao. Satria afaka mizara ny tranokalan'izy ireo ny mpampiasa, tsy misy farany ny fahafaha-mivezivezy. Ny hany mila ataonao dia ny mamorona efitrano fifampiresahana, manasa ny namanao sy ny fianakavianao ary manomboka mijery binge.
Mifandraika: Lalao Virtual Happy Hour 8 hilalao (satria izany no ataontsika ankehitriny)
Sokajy Anontanio The Expert Fironana Teknolojia
tantaram-pitiavana sarimihetsika mba hijery Hollywood
notapatapahina ho an'ny volo salantsalany
sarimihetsika romantika tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
fitsaboana latsaka volo ao an-trano
tsara indrindra amin'ny sarimihetsika amin'ny taona